Serivisy fitaterana entana an-tserasera 24X7X365 andro
Packers eo an-toerana sy mamindra an'i Mumbai mankany Bangalore
Best Packers sy mifindrafindra Mumbai mankany Chennai
Packers sy Movers eo an-toerana Mumbai mankany Hyderabad 24x7x365 andro azo atao amin'ny fifindrana trano miaraka amin'ny serivisy famindrana birao
Nankatoavin'ny IBA ny Packers & Movers tsara indrindra eo an-toerana Mumbai mankany Pune
Inona avy ireo karazana serivisy fitaterana fiara misy any India, ary lazao ny tombony azony
serivisy fitaterana entana
Kamiao mitondra entana mavesatra
Ny orinasa mpamono entana no safidy tsara indrindra ho an'ny olona mila mamindra ny vokatra trano amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Ireo orinasa ireo ihany koa...
Ahoana no anampian'ny Packers sy Movers matihanina amin'ny famindran-toerana?
Ny orinasa manampy ny olona amin'ny serivisy fandefasana entana dia hanana orinasa any amin'ny fanjakana sy tanàna isan-karazany toa an'i Chennai, Bangalore, Kolkata ary Mumbai. Hafa...
2,570mpanjifaRaiso amin ny
Fantatsika rehetra ny maha-zava-dehibe ny serivisy mpamono trano sy mifindra monina. Tena manara-penitra fa ny ankamaroan'ny mpiasa ivelan'ny tanàna dia mila manova ny entany...
Amin'izao taonjato faha-21 izao, maro amintsika no miasa amin'ny sehatra tsy miankina samihafa. Ny asa toy izany dia mitaky fifindra-monina avy amin'ny tanàna iray mankany amin'ny iray hafa mba ho akaiky ...
Ny serivisy fitaterana fiara dia zava-dehibe amin'ny famindrana entana sy entana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa manerana ny firenena. Manana anjara toerana lehibe ny serivisy fanofana fiara...
123...73Page 1 ny 73
serivisy fitaterana entana293
serivisy fitaterana entana akaiky ahy216
indostrian'ny fitaterana entana sy logistika72
masoivoho mpitatitra entana55
Karazana fiara ara-barotra37
vaovao momba ny fitaterana33
Araho izahay ao amin'ny Instagram @heavyhaulagetrucks
Inona avy ireo orinasa sy indostria izay misy fiantraikany manokana amin'ny toekarena manerantany?
Ny raharaham-barotra hita indrindra amin'ny tontolo iaraha-monina, gazety, tsena ara-dalàna dia ireto manaraka ireto :-
Orinasa mpanadio menaka
Orinasa mpamokatra herinaratra
Indostrian'ny Fambolena siramamy
Indostria fanodinana sakafo
Ny orinasa TEA
Indostria elektrika sy elektronika
Ny orinasa Auto Components
Ny orinasa Biotechnology
Airlines sy Aviation Industries
Courier sy Parcel Industries
Ny orinasa Packers Movers
Indostria fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Amin'ny antsalany, firy ny karazana kamiao fiara ara-barotra misy eto amin'izao tontolo izao?
Ny ankamaroan'ny kamiao fiara ara-barotra izay hita eran'izao tontolo izao dia toy izao manaraka izao
Kamiao Mini (Tempo MCV)
Fiara ara-barotra ICV Truck Intermediate
Kamiao HMV (Fiara moto mavesatra)
Kamiao fako mampidi-doza
Kamiao mitondra tena
Kamiao Bulker Mixers Concrete
Kamiao anaty vata fampangatsiahana
Kamiao mitondra fiara
Kamiao goavam-be mitondra entana
Inona no atao hoe India?
India no tanin'i Devbhoomi sy Bharat Mpanjaka be voninahitra. Noho ny maha tsotra, mora, nandroso sy nahomby, nandritra ny 1000 taona lasa izay, dia maro ireo mpanafika vahiny tonga nanimba azy tamin'ny fitaka sy nandika ny kolontsaina ary nametraka ny maha-izy azy teo amin'ny tenantsika tamin'ny filazana ny sivilizasiona idealy antsika ho malemy. Vokatr'izany dia sady tsy mahay Hindi izahay no tsy mahazo ny Urdu tsy afaka miteny anglisy.
Inona ny code postal an'i India?
Kaody paositra novolavolain'ny paositra indiana dia jereo ny kaody pin sy ny kaodim-paositra misy anao:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
Firy ny renirano any India ?
183 + Renirano any India Ref nataon'i:- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
Firy ny distrika any India?
718 Distrika India .
Iza no fanjakana lehibe indrindra any India?
Rajasthan (342,239 km²) no fanjakana lehibe indrindra ao India amin'ny lafin'ny velarantany .
Inona no atao hoe pan India?
PAN India ? dia midika hoe Fanatrehana manerana ny firenena. Izy io dia teny izay ahitana saika ny zavatra rehetra miparitaka na mifandray amin'i India. Ohatra, mety ho momba ny orinasa, orinasa, ary na inona na inona momba ny firenena izany.
Firy ny totalin'ny kamiao anananao?
Manana isika Kamio 5000 mifandray avy amin'ny 638 distrika izay ametrahanay na averinay entana avy any an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, metro ary toerana sarotra lavitra. Miaraka amin'izany, omenay azy ireo ny kodiarana, ny bateria, ny kojakoja ary ny fiantohana fiantohana amin'ny vidin'ny mpivarotra. Ary ny 40% amin'ny tombom-barotra amin'ity dingana iray manontolo ity dia mitondra anjara biriky kely ho an'ny fianakavian'ny mpamily kamiao tsy nahy ho an'ny loharano ara-bola na ara-pahasalamana. Mba tsy hifarana ny fiainany ho faty alohan'ny fanajan-tena.
Firy ny kamiao any India?
Tamin'ny alàlan'ny loharanom-baovao no nahazoana fa amin'ny antsalany dia kamiao ara-barotra 80 lakh no miasa any India. Ny 20% amin'ireo ihany no miasa isan'andro.
Ny ambiny 30% ny kamiao miandry elaela vao miseho ny laharan'izy ireo ao amin'ny orinasa mpaninjara na fampidinana entana.
On 15% amin’ny arabe, ny kamiao voadonan’ny birao mijoro eny amin’ny lalam-pirenena haka kolikoly.
10% ny kamiao mijanona noho ny fiatoana na tsy fahampian'ny mpamily.
Ary ny sisa 25% ny kamiao miandry ny fiverenana entana any amin'ny tanàna kely, distrika na toerana lavitra tsy azo idirana any India.
toetoetran'ny mpamily kamio tena ratsy noho ny tsy fahazoana entana tsara.
Inona no atao hoe transport passive?
Fitaterana mandeha tsy mila fampidirana angovo. Ohatra iray amin'ny fitaterana mandalo dia diffusion, ny fivezivezen'ny molekiola avy amin'ny faritra misy fifantohana ambony mankany amin'ny faritra ambany. Ny proteinina mpitatitra sy ny proteinina fantsona dia mandray anjara amin'ny diffusion mora.
Nahoana no tsy mitovy ny vidin'ny fitaterana sy ny logistika amin'ny orinasa rehetra?
Betsaka ny antony mavesa-danja amin'izany, noho izany dia hita matetika ny voka-dratsiny manaraka vokatry ny toe-tsaina tery.
Tsy voafehin’ny fanjakana ny saran-dalana kilometatra eo amin’ny indostrian’ny kamiao.
Malemy ny sendikan'ny fitaterana
Tsy mbola nisy ny fivoaran'ny indostria na mandis na aiza na aiza.
Noho ny kapitalisma, ny fanjakazakan'ny olona vitsy dia vitsy no niorina tamin'ity orinasa ity, izay mandeha ny ampihimamba tsy misy dikany.
Mampiasa vola mainty ireny sadhus, babas, mpitarika politika ary vahiny ireny mba hampiroboroboana ny kapitalisma sy hisambotra orinasa. Ary koa mampiasa lalana mahery setra mba hahazoana tombony. Ireo vaovao ireo dia hita ao amin'ny gazety News.
Noho ny tsy fisian’ny firaisankina dia nitombo ny biraom-panjakana ary niharan-doza ny fiainan’ny mpamily. Na dia miasa 18 ka hatramin'ny 20 ora aza dia tsy afaka mamaly ny filany ny kilasin'ny mpamily.
Midangana ny vidin’ny fiara sy ny enti-manana isan’andro, saingy tsy nitombo ny saran-dalana hatramin’ny folo taona lasa ary nitombo 80% mahery ny fandaniana.
Ny transporter dia mandoa hetra 18% hatramin'ny 28% amin'ny fandaniana rehetra fa tsy mahazo tombony amin'ny fiverenan'ny taxi.
Misy olana amin'ny famerenana entana amin'ny fotoana rehetra. Ny entana miverina avy amin'ny tanàna Tier 2 Tier 3 dia tsy maintsy miandry 5 ka hatramin'ny 10 andro. Tsy azo avy amin'ny toerana hafa ny entana.
Noho ny tsy fahampian’ny tontolo iainana, ny krizy ara-toekarena, ny kolikoly sy ny fitondran-tena tsy mety ataon’ny olona hatrany, dia ao anatin’ny hamamoana ny mpamily, ka mitombo hatrany ny loza.
Fiarovana ny fandoavana entana sy deduction feno
Tsy mahavita ny raharahantsika ny politikan'ny governemanta sy ny governemanta.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia hisy fiantraikany amin'ny lozisialy sy ny saran'ny fitaterana.
Fanamarihana: - Ny folo taona lasa izay dia 5% amin'ny vokatrao ny vidin'ny fitaterana. Amin'izao fotoana izao dia nitombo hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 30% izany.
Inona no maha samy hafa ny Transport v/s Logistics?
Ny fitaterana dia ny FIHETSEHANA MIvantana ny entana ary ny logistics dia ny FITANTANANA NY FITATERANA ANATY SY ILAINA NY ENTANA manomboka amin'ny mpanamboatra ka hatramin'ny mpampiasa farany…
Ahoana no hanombohana orinasa fitaterana any India?
Ny 99%-n'ny mpitatitra any India dia voaporitra ara-jeografika sy ara-toekarena. Raha te hanao toy izany koa ianao, dia hanomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 50 lakh rupees izany. nikatona tamin'ny fatiantoka tao anatin'ny 5 taona. Fa ho an'ny raharaham-barotra mandroso sy idealy, ianao mila renivola 10 crore mahery, mpiasa mahay, teknolojia avo lenta, traikefa 2 taona miaraka amin'ny fahalalana ara-jeografika feno dia tena ilaina.
Inona no fomba fitaterana mora indrindra any India?
Ny rano, ny tany ary ny rivotra, amin'ny ankapobeny, ireo fitaovana rehetra ireo dia misy amin'ny firenena rehetra ho an'ny fitaterana, fa ny fitazonana ny toerana haleha dia voafaritra araka ny zava-misy. Manome karazana serivisy fitaterana an-dalambe 32 izahay any amin'ny faritanin'i India sy firenena Aziatika izay mety ho mora sy mahasoa anao.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana mitondra fiara any India?
Betsaka ny ezaka nataon’ny fanjakana tamin’ny fahazoana fahazoan-dalana mamily fiara, saingy sarotra be ny mahazo fahazoan-dalana tsy misy solontena. Ny vidiny farany ihany koa no manapa-kevitra amin'ny mpandraharaha. Ao anatin’izany no anaovana ny fahamaizana takiana araka ny vola ary vokatr’izany dia toa mihamitombo hatrany ny asan-jiolahy sy ny loza.Amin’ny alalan’ny fikambanana tsy miankina vaovao misy anay, dia ezahinay ny manome fahazoan-dalana maimaimpoana ho an’ireo sahirana manana fiofanana tsara mandritra ny 6 volana. Mba hahazoan’ireo tsy an’asa sahirana ary hahazo mpamily mahay sy mandroso ny fiaraha-monina.Eo am-pamoahana ity tetikasa iray manontolo ity isika amin’izao fotoana izao.
Inona no hevi-diso lehibe indrindra amin'ny orinasa fitaterana?
Raha tsy miraharaha ny jeografia sy ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fitaterana, dia heverina fa miasa amin'ny vidiny mora ny tompon'ny fiara na dia aorian'ny trosa be loatra, ny andraikitra ary ny fandaniana.
Inona ny laharana fitaterana?
Mpitatitra lalana 919408275245 +
Inona no fomba fandefasana tsara indrindra?
Mametraka fanontaniana 33 amin'ny mpanjifanay izahay ary manolotra 2 na 3 arakaraka ny filany, ny tahan'ny tetibola ary ny entana. Aorian'ny fandraisana ny baikon'ny asa sy ny 20% mialohan'ny tolotra efa nekena no alefa ny kamiao entina entina. Aorian'ny fandefasana dia fenoy ny antontan-taratasy rehetra. Ary raiso ny vola 80% fandoavam-bola. Ary ampahafantaro isan'andro ny mpanjifa momba ny fivoaran'ny asany. Aorian'ny fampidinana entana any amin'ny toerana haleha dia raisina ny hevitra avy amin'ny andaniny roa ho fanatsarana ny ho avy.
Ny fandraisan'anjaran'ny governemanta ankehitriny amin'ny fampiroboroboana ny fandraharahana Indiana?
Ny manam-pahaizana manokana momba ny indostria dia milaza indrindra fa ny governemanta dia mitaky ny fiaretana amin'ny fandaniana bebe kokoa amin'ny sehatra manokana. Miaraka amin'ny Governemanta ankehitriny dia mifantoka amin'ny lafin-javatra isan-karazany toy ny fanabeazana, fotodrafitrasa, fitsaboana, fifandraisana ary maro hafa. Ireo rehetra ireo dia lafin-javatra lehibe mamelona ny fitomboana miaraka amin'ny fitotongan'ny fitomboana ara-toekarena. An-jatony ny mpandraharaha ary koa ny fanombohana amin'ny sehatry ny famokarana nohatsaraina miaraka amin'ny toekarena. Nametraka fepetra sasany hamelomana indray ny toekarena miaraka amin'ny fitomboan'ny fitomboana ny governemanta. Mamaly ny filan'ny famokarana sy ny sehatry ny serivisy hafa i India ary ny 80% amin'ny harin-karena dia mihatsara.
Inona ny fizarana mpanjifa? Nanao ahoana ny kilasin'ny mpanjifa indiana?
Ny fizarana mpanjifa dia tsy inona fa fomba fanao amin'ny fizarana mpanjifa ho vondrona iray. Izy io dia nanatontosa ny ankamaroan'ny zavatra mifandraika amin'ny marketing. Noho izany, mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana ny tombontsoa sy ny fahazarana mandany amin'ny ankapobeny. Noho izany, antsoina hoe fanombanana ny fomba manokana hikarakarana ny filana ara-barotra.
Indianina an-tapitrisany no manana ny isan-karazany lehibe indrindra amin'ny kilasy fototra. Heverina ho ambony ihany koa izy io noho ny isan'ny tsena Indiana. Anisan'izany ny saranga antonony, manankarena ary ambany salan'isa. Manana sandan'ny harena mihoa-pampana izy io ary indraindray tafiditra ao anatin'ny toe-javatra faran'izay mahantra. Ny fanamarinana ny angon-drakitra dia manambara ihany koa ny kilasy fototra lehibe Indiana.
Inona no nahatonga ny fahasamihafàna ara-jeografika manasarotra ny orinasam-pandraharahana marobe any India?
Ny foko, ny kolontsaina, ny firazanana, ny maha-lahy na maha-vavy ary ny karazana maha-izy azy dia mamaritra ny fomba ahafantaran'ny olona, ​​ny fahitany ary ny traikefany amin'izao tontolo izao. Ny olona avy amin'ny tontolo samihafa dia mieritreritra, manao fihetsika ary mianatra amin'ny fomba hafa. Sarotra ho an'ny orinasam-pandraharahana marobe any India raha miezaka ny hahatakatra ny mpiasany. Ny tena zava-dehibe, ny fahasamihafan'ny jeografia dia hitarika amin'ny tsy fahampian'ny firaisankina ao anatin'ny fikambanana. Raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, ny fahasamihafan'ny jeografia dia afaka manome amin'ny fomba fijery feno sy mirefy maro ho an'ny fahiratan-tsaina sy fahendrena ao anatin'ireo orinasam-pandraharahana marobe. Ny orinasa any India dia tsy manana olana bebe kokoa amin'ny varotra ara-barotra amin'ny fanjakana maro samihafa ara-jeografika. Izany dia satria ny dingana dia tsotra kely.
Misy fiara ara-barotra mahomby ve any India araka ny efa nampoizina?
Lasa tena zava-misy kokoa ny Tetezamita ao India noho ny fitohanan'ny governemanta ankehitriny ary tosika goavana amin'ny fivezivezena herinaratra. Ny sampan-draharahan'ny governemanta – NITI Aayog dia nitarika ny tetezamita tamin'ny fampitomboana ny fomba fitaterana tsy misy etona. Ny kamiao Multi-Axle (MATs) dia heverina ho fiara ara-barotra mahomby misy any India ary ampiasaina betsaka amin'ny fitaterana indostrialy. Ireo fiara ireo amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny 26.2 taonina ka hatramin'ny 49 taonina ny lanjan'ny fiara. Niakatra 2009% ny varotra tamin'ireo fiara ireo teo anelanelan'ny taona 2010 sy 55. Ny fiara ara-barotra entana dia nohatsaraina fatratra amin'ny ambaratonga ambony indrindra 60% amin'ny tsenan'ny fiara ara-barotra amin'ny ankapobeny dia nohatsaraina fatratra.
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny lozisialy na ny vidin'ny fitaterana any India?
Ny sehatry ny fitaterana indiana dia tena lehibe sy isan-karazany. Vahaolana goavana amin’ny fiatrehana ny fitaterana an-dalambe no nanatanteraka izany. Ho an'ny fifindran'ny entana sy ny vokatra, ny fitaterana an-dalambe dia tena tsy maintsy atao ary misy hetsika tsara. Betsaka ny vokatra azony ary miantehitra amin'ny fitaterana an-dalana ny ankamaroan'ny fanafarana. Ary koa, ny vidin'ny fitaterana any India dia mora ary miankina amin'ny haben'ny orinasa. Izy io dia miasa avy amin'ny famoahana izay mahatonga ny salan'isan'ny mponina amin'ny fotoana ilaina amin'ny fitaterana. Noho izany, alaivo mifototra amin'ny fahasamihafan'ny lozisialy ary ny saran'ny fitaterana dia voafetra amin'ny sehatry ny fandraharahana.
Inona no atao hoe fitaterana mavesatra Oversize ODC asa tsotra any India?
Ny ODC, izay antsoina hoe entana mihoatra ny refy dia ampiana tanteraka ivelan'ny tokotanin'ny fiara mba hamindrana ny entana be loatra. Na ny halavany sy ny haavon'ny entana dia lehibe kokoa noho ny fiara mahazatra. Ireo entana mavesatra ireo dia ampiasaina amin'ny sehatra anatiny sy ara-barotra. Ny fitaterana ODC any India dia afaka manampy ny olona hamindra haingana ny entany mavesatra avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray manaraka. Satria fitaovana maoderina maro ireo fiara ireo. Mahay mitondra entana mavesatra amin'ny halavirana lavitra izy ireo. Ny mpanome tolotra fitaterana dia manana traikefa ampy amin'ity sehatra ity, noho izany ny ekipa dia manao ny fizotran'ny fitaterana amin'ny ankapobeny ho tsy misy olana.
Firy amin'ireo mpanamboatra kamiao ara-barotra entana entana tsara no malaza eran-tany?
Betsaka ny mpanamboatra eo an-toerana na isam-paritra na vondron'ny fivoriambe izay manamboatra fiara ara-barotra amin'ny anarana maro. Fa hizara aminareo ny lisitry ny malaza indrindra avo-end, mahomby sy High kalitao mpanamboatra kamiao mavesatra.
reraka ny fon'izay
Firy ny fanjakana any India?
India dia manana Hoy i 29. Misy ihany koa 7 faritany sendikà .Fa raha jerena ny fahatsorana sy ny zava-bita dia jerena araka ny faritra manaraka ireto.
South India :- Andhra Pradesh ,Karnataka , Kerala ,Tamil Nadu ,Telangana , Pondicherry (na Puducherry),
Inde tandrefana :- Maharashtra , Goa ,Gujarat , Dadra sy Nagar Haveli , Daman & Diu ,Rajasthan
East India (Avaratra atsinanan'i India):- Arunachal Pradesh , Assam , Meghalaya , Manipur , Mizoram , Sikkim , Tripura , Nagaland
India Avaratra :- Bihar , Chhattisgarh , Haryana , Chandigarh , Himachal Pradesh , Jharkhand , Madhya Pradesh
Islandy :- Andaman & Nicobar , Lakshadweep
Firy ny fiteny any India?
Any India, manana fiteny 1600+ mahery izay tenin-drenin'ny olona isika. Any amin'ny faritra samihafa eto amin'ny firenentsika dia fiteny samihafa no ampiasain'ny olona ao amin'io faritra io.
Firy ny tetezana any India?
Tetezana lehibe 200+ any India fa noho ny tahan'ny kolikoly tsy dia tsara loatra.
Firy ny vohitra any India ?
tanàna 6,64,369 XNUMX XNUMX any India .
Firy ny fanjakana sy ny faritanin'ny sendikà any India?
India dia manana Hoy i 29. Misy ihany koa 7 faritany sendikà.
Inona ny GDP an'i India?
GDP amin'ny vidiny ankehitriny amin'ny taona 2020-21 dia tombanana amin'ny Rs 197.46 lakh crore mifanohitra amin'ny tombantombana voalohany nohavaozina amin'ny Rs 203.51 lakh crore amin'ny taona 2019-20, mampiseho ny fihenan'ny -3.0% isan-jato raha oharina amin’ny fitomboana 7.8 isan-jato tamin’ny taona 2019-20, hoy ny minisitera.
Inona ny ora any India?
UTC/GMT +5:30 ora
Inona no kamiao tsara indrindra?
Betsaka ny mpanamboatra kamiao any India, izay mandray ny fanavaozana isan'andro. Na izany aza, araka ny fanadihadiana ny lalambe
Kamiao TATA: - Tsara indrindra amin'ny fivarotana, fikojakojana ary fitsitsiana solika
Ashok Leyland:- Tsara indrindra ho an'ny Hetsika Side Hill.
Eicher: - Fahombiazana amin'ny solika super, Rafitra vaky tsara, Mahazo aina sy milamina.
Kamiao Mahindra :- Malaza amin'ny sehatra fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Bharat Benz: - Enta-mavesatra be loatra ny fitaterana entana
ISUZU:- LCV Segment tsara indrindra ho an'ny olon-tsotra kely ho an'ny orinasa eo an-toerana.
Ny karazana kamiao rehetra sy ny tantaran'ny kamiao:- Tsindrio azafady
Inona avy ireo fitaovam-pitaterana samihafa?
Ao amin'ny fahalalako dia misy fitaovana sy fomba fitaterana samihafa rivotra, rano ary fitaterana an-tanety, izay ahitana Rails na lalamby, fomba ho avy fomba tady sy rafitra drones
Inona no atao hoe fitaterana sy serasera?
Ny fitaterana dia manana anjara toerana tena ilaina amin'ny asa ara-toekarena. Raha tsy misy fidirana ara-batana amin'ny loharanon-karena sy tsena, fitomboana sy fampandrosoana ara-toekarena tsy ho azo atao. Ny rafi-pitaterana mahomby, noho izany, dia singa fototra ahafahana mampandroso ny toekarena maharitra.
Ohatrinona ny sandan'ny logistik'ny fitaterana sy ny fitaterana?
Fitaterana entana ankapobe 15 Rupia isaky ny taonina isaky ny kilometatra
Fitaterana entana entana be loatra 25 Rupia isaky ny taonina isaky ny Kilometatra + Vidin'ny fahazoan-dàlana rehetra
Fepetra sy fepetra mihatra
Iza no nanangana fitaterana decarbonizing tany India?
Ny International Transport Forum (ITF) sy ny National Institute for Transforming India (NITI Aayog), dia niara-niasa tamin'ny tetikasa Decarbonising Transport in Emerging Economies (DTEE) any India.
Ahoana ny fomba fitaterana biby any India?
Ny biby fiompy dia biby fiompy. Ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i India, izay tsy dia tsara ny serivisy fitaterana entana ho an'ny daholobe sy entana, dia sarotra ny mahita mpitatitra biby fiompy. Manampy anao izahay hahita ny mpivarotra tsara indrindra amin'ny fomba fijery mahomby.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana fitaterana any India?
Ny fisoratana anarana Small Transport Startups Enterprise avy amin'ny vavahadin-tserasera MSME sy ny laharan'ny fisoratana anarana avy amin'ny vavahadin-tserasera GST dia azo alaina maimaim-poana amin'ny mpitatitra vaovao ao anatin'ny herinandro. Raha tsy azonao atao dia ny GRAHAK SUVIDHA KENDRA dia handoa Rs.500 ianao. Amin'ny ankapobeny, ny asanao dia ho vita hatramin'ny 20 lakhs. Aorian'ity taratasy ity dia hitombo ny fandaniana amin'ny fidiram-bolanao sy ny orinasanao. Raha ilaina dia tsy maintsy atao ny fisoratana anarana eo an-toerana na isam-paritra.
Inona no atao hoe fitaterana?
Ny dingana atao amin'ny famindrana olona na entana dia antsoina hoe fitaterana.Ny tanjona amin'ny famindrana toerana na fitaterana dia amin'ny ankapobeny dia tombony amin'ny lafiny maro. Ny ankamaroan'ny fitaovana miasa telo malaza dia ny fitaterana rano, fitaterana an'habakabaka, fitaterana an-dalambe. Amin'izao fotoana izao, miasa sy eo an-dalam-pandrosoana ihany koa ny fitaovana vaovao toy ny lalamby, ropeways, drones.
Firy ny karazana fitaterana ?
Ny ankamaroany dia ny fitaovana miasa telo malaza indrindra fitaterana rano, fitaterana an'habakabaka, fitaterana an-dalambe.Amin'izao, fitaovana vaovao toy ny lalamby, ropeways, drones miasa ihany koa ary eo an-dalam-pandrosoana. Mahay 32 karazana serivisy fitaterana an-dalambe izahay.
Iza no minisitry ny fitaterana an'i India?
MINISTERAN'NY FITATERANA LALANA & FAMPANDROSOANA
Telefaonina: + 91 11-23711252, 23710121
Inona no dikan'ny sy fampiasana ny orinasa na ny indostria raha ny tena izy?
Ny orinasa na ny indostria, raha ny tena izy, dia orinasa iray izay mirotsaka indrindra amin'ny orinasa. Ny orinasa dia mety ho voarafitra amin'ny fomba maro. Ny orinasa dia mety ho orinasa, orinasa tokana na eo ambanin'ny fiaraha-miasa. Miorina amin'ny orinasa samihafa iarahanao, mety ho an'olon-tokana na vondron'olona mihitsy aza. Ny orinasa dia mety ho voalamina tsara ao anatin'ny toe-javatra maro. Ny andraikitra dia karazana orinasa manan-danja izay heverina indrindra. Ny orinasa na ny indostria any India dia manana fitomboana lehibe miaraka amin'ny fanatsarana ny teknolojia maoderina sy ny fitaterana manerana ny firenena.
Inona no fiantraikan'ny tombontsoam-bahoaka amin'ny indostria na indostrialy?
Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiaraha-monina ny indostria ary tsy maintsy miandrandra ny fiovana sasany eto amin'ny firenena ny olona. Mifototra amin'ny tombontsoan'ny besinimaro amin'ny indostria, mitombo ny tombom-barotra sy ny asa. Nitombo ny tanàn-dehibe ary nifindra tany amin'ny foibe an-drenivohitra ny olona tamin'ny fampandrosoana fikarohana. Fitaterana eny an-dalana, misy ny fivoarana natsangana ho fanampiana ny fiaraha-monina. Nisy fivoarana ara-toekarena koa tao anatin'ny revolisiona indostrialy. Nitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina eo amin'ny tombontsoam-bahoaka amin'ny indostrialy izany. Ny revolisiona dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fitaterana an-dalambe amin'ny lafiny indostrialy. Mahazo karama ny mpiasa ary mahazo tombony amin'ny famokarana entana faobe.
Inona no atao hoe Logistic ary inona no miasa?
Ny Logistics dia matetika ampiasaina hanondroana dingana iray mamindra loharano ao anatin'izany ny fitaovana, ny vokatra, ny akora ary ny fitahirizana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray manaraka any amin'ny tanjona kendrena. Ity teny ity dia ampiasaina amin'ny fampiharana maro. Misy karazany maro ny serivisy lozisialy azo ampiasaina fa ny fitaterana an-dalambe dia lasa malaza kokoa eo amin'ireo matihanina mpandraharaha. Satria raha tsy mahatratra ny mpanjifa ny vokatra na fitaovana ara-barotra dia tsy hahomby izany. Io no toerana mety indrindra rehefa mitana anjara toerana lehibe ny fitaterana an-dalambe. Misy fiantraikany amin'ny lafiny maro hafa amin'ny orinasa ihany koa izany. Raha alefa ara-potoana any amin'ny mpanjifanao ny vokatra, dia hampitombo ny tombom-barotry ny orinasa izany.
Firy ny karazana fitaterana ampiasaina bebe kokoa any India?
Miaraka amin'ny tanàn-dehibe haingana any India dia nihatsara ihany koa ny fitomboan'ny toe-karena ao amin'ny firenena. Ny rafi-pitaterana dia nohatsaraina indrindra amin'ny fomba miavaka toy ny fitaterana an-dalambe, lalamby, fitaterana rano an-tanety, seranam-piaramanidina ary zotram-piaramanidina, fandefasana amoron-dranomasina sy ny maro hafa. Ny lalambe no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fitaterana mitondra ny 85% amin'ny fitambaran'ny fifamoivoizana eto amin'ny firenena. Manana fiara voasoratra anarana 191.7 tapitrisa eo ho eo i India ary nohatsaraina ho 94% ny tahan'ny fitomboana isan-taona avy amin'ny fitambaran'ny fiara misoratra anarana ao India. Miaraka amin’ny fitombon’ny fiara eny amin’ny arabe dia manome lalana ho an’ny fampandrosoana ny fandraharahana ihany koa.
Inona no tsy fahampian'ny orinasa fitaterana?
Ireto ny tsy fahampian'ny orinasa fitaterana toy izao manaraka izao:
Loza matetika Ny fitaterana an-dalambe any India dia mampidi-doza. Tsy natao mihitsy ny fepetra fiarovana ilaina amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Lalana tsy ampy Lalana maro ao India no tsy ampy ary misy amin'ny endrika ratsy ihany koa. 34 km monja ny lalana isaky ny 100 km².
Hetra mavesa-danja Isan’izany ny tsy fahampian’ny asa fitaterana an-dalambe. Ny vesatry ny hetra isaky ny fiara eto amin'ity firenena ity dia Rs. 3500.
Ratsy fikojakojana lalana Tsy voakarakara tsara ny lalana any India. Tsy misy afa-tsy 0.1% amin'ny fidiram-bolam-pirenena ampiasaina amin'ny fikojakojana ny lalana any India.
Ny fiakaran'ny vidin'ny gazoala sy ny lasantsy Miakatra tsy an-kijanona ny habetsahan'ny fitaterana an-dalambe.
Tsy mety amin'ny entana be dia beTsy mety amin'ny entana mavesatra
Inona avy ireo olana ara-barotra lehibe any India?
Efa hatry ny ela ny Karana no nampiroborobo ny fandriampahalemana. Ny orinasa dia nihatsara fatratra hatrany amin'ny tampony, saingy misy ihany koa ny olana atrehin'ny ankamaroan'ny orinasa. Na mifandray amin'ny governemanta izany, na heloka ataon'ny 'andriamanitra', na toetry ny lalana, na kolikoly, na hafa, dia misy fiantraikany amin'ny toe-javatra sasany ny orinasa. Ny kolikoly no valanaretina ratsy indrindra miely patrana any India ka zava-dehibe ny fikarakarana amim-pahendrena sy haingana. Na dia mila fanovana maro aza ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ireto ny sasany amin'ireo zavatra manan-danja tokony hodinihintsika amin'ny fiatrehana avy hatrany.
– Tsy mahay mamaky teny sy manoratra
– Rafitra fanabeazana
– Fahadiovana fototra
– Rafitra ara-pahasalamana
– Fiarovana ny vehivavy
Inona ary firy no latsaka amin'ny fiantraikan'ny orinasa ratsy amin'ny serivisy fitaterana ratsy?
Noho ny faharatsian'ny tolotra fitaterana dia maro ny orinasa voakasika. Fifindran'ny entam-barotra ho any amin'ny toerana niharan'ny faharatsian'ny fitaterana an-dalambe. Tafiditra ao anatin'izany ny zavatra marobe tokony hotadidina sy ny famokarana ambany. Mba hifehezana ity toe-javatra ity dia mila mandresy haingana araka izay azo atao ny fitaterana mahantra. Mampitombo ny lalana ampy any amin'ny faritra ambanivohitra izany dia mampitombo ny vokatra. Ho an'ny fambolena sy ny tsena dia ilaina ny fitaterana an-dalambe. Noho izany, ny fitaterana mahantra dia tsy maintsy mamaha amin'ny alàlan'ny fandrefesana mety. Indrindra ny any ambanivohitra, zava-dehibe ny fitaterana mba hanatanterahana ny zavatra maro am-pilaminana. Noho izany, tsy maintsy mandray fepetra ny fitondram-panjakana mba hialana amin’izany hevi-diso izany ary hanao izay fara heriny amin’ny fampiroboroboana ny fitaterana an-dalambe.
Ny politikan'ny governemanta Indiana no mety indrindra amin'ny fanaovana raharaham-barotra?
Vao haingana, ny governemanta Indiana notarihan'i Narendra Modi dia mifantoka bebe kokoa amin'ny tontolo midadasika misy ireo orinasa vao misondrotra tsy misy farany. Mba hanatrarana izany dia mamorona fahafahana sy programa vaovao ny governemanta Indiana. Manampy ireo orinasa amin'ny fitaizana sy ny fanavaozana izy ireo. Betsaka ny hetsika noraisin'ny governemanta Indiana hanohanana ny fandraharahana vaovao. Tanjona ihany koa ny hampiroborobo ny sivilizasionan'ny famoronana eo amin'ny tanora indiana. Miaraka amin'ny tombotsoan'ny antontan'isa miavaka sy lehibe, India dia afaka manangana sy manatsara ny orinasa tsirairay ary manao ny asa ho tombontsoan'ity firenena ity sy izao tontolo izao. Atao avokoa ny dingana rehetra ahafahana mampandroso ny firenena.
Terms sy ny Condition
Vaovao momba ny fitaterana
Kamiao mpamily kamio
Minisiteran'ny Fitaterana an-dalambe
Amin'ny Toll Route
Fijerena ny antsipirihan'ny fiara
Mpamory kamiao mitondra entana mavesatra voalohany ao India
Fanohanana sy fitehirizana entana ho an'ny Logistika
Fanohanana ny mpanjifa:- +919408275245
Faritra ora India :- 8 maraina hatramin'ny 8 ora alina
Ny mangarahara amin'ny raharaham-barotra, ny fiaraha-miasa am-pirahalahiana sy ny fandrindrana, ny fahombiazan'ny tena, ny fitarihana araka ny tokony ho izy ary ny fehin-kevitra ambony indrindra dia ny famaritana ny ABCC INDIA Project Cargo Corporation. India, Nepal, Bhutan, Bangladesh 686 distrika 6,49,481 dia mametraka ny tsy tapaka, tsotra, mora idirana, mora azo, azo ianteherana, misongadina, mitondra tsara ny tolotra ara-toekarena, ny toerana misy antsika matihanina sy mendrika any amin'ny firenena rehetra. Manana ny ezaka rehetra izahay mba hampitomboana ny mangarahara sy ny fahatsoran'ny orinasa amin'ny alalan'ny fanomezana tolotra mitohy, tsy mitanila, tsotra, mora ary azo antoka ho an'ny rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanajana ny tombontsoan'ny mpandraharaha. Miaraka amin'ny fehin-kevitra tsara indrindra amin'ny fampifandraisana ny faritany tsirairay amin'ny fepetra tsara indrindra sy ny fototry ny foto-kevitra, dia nizotra tamin'ny lalan'ny fandrosoana ny fomba fijerin'ny raharaham-barotra sy ny fahamendrehan'ny firenena. Amin'izay dia tsy mahazo ny anaran'ny firenena mandroso isika fa firenena mandroso. Ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa sy ny fahatokisana dia zava-dehibe kokoa noho ny fahaizan'ny orinasa mamokatra vokatra tsara, ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny fahafaham-po no zava-bita lehibe indrindra ananan'ny fikambananay.